7 NOVAMBRA 2018 : Daty hanamarika ny tantaram-pirenena Malagasy
Iray andro sisa dia higadona ny datin’ny 7 novambra 2018. Daty efa nandrandrain’ny rehetra hatramin’ny ela. 6 novembre 2018
Kihon-dalana lehibe iray izay heverina fa hampiova indray ny tantaram-pirenena malagasy. Antenain’ny maro an’isa fa lalana tokana hivoahana mankany amin’ny fandrosoana tsaratsara kokoa sy hialana amin’izao fahantrana mianjady amin’ny rehetra izao.
Tonga ny fotoana. Rahampitso no hiditra amin’ny kihon-dalana lehibe ny firenena. Hifidy izay ho filohany hitantana an’i Madagasikara ao anatin’ny dimy taona manaraka indray ny olom-pirenena malagasy. Safidy izay hiantoka tanteraka ny ho avin’ny vahoaka Malagasy tsy ankanavaka, eny fa hatramin’ny taranaka fara aman-dimby mihitsy. Tao anatin’izay iray volana latsaka nanatanterahana ny fampielezan-kevitra izay dia samy naneho izay tsara indrindra teny aminy ireo kandidà hofidiana ho filoham-pirenena.
Samy nampahafantatra tamin’ny antsipiriany ireo tetikasany, nandresy lahatra ary samy nampanantena zavatra goavana ho an’ny vahoaka Malagasy avokoa ireo mpifaninana. Anjaran’ny tsirairay araka izany ny mamakafaka sy misafidy tsara izay olona heveriny ho mendrika fa ho raiamandrenin’ny vahoaka Malagasy ary omena fitokisana indray amin’ny fitantanana ny firenena ho amin’ny dimy taona manaraka. Niaraha-nahita ny laharan’ny fandrosoan’i Madagasikara mitaha amin’ireo firenena Afrikanina maro fa kely dia kely sisa dia hipaka any amin’ny laharana farany ny firenena malagasy.
Hita mibaribary amin’ny fiainana andavanandron’ny mponina izany, satria mihamaro ireo manorim-ponenana eny an-dalam-be, miha mitombo isan’andro ireo zaza mangataka, mitotongana andro aman’alina ny fari-piainan’ny vahoaka. Heverina fa ity fifidianana ity no dingana iray lehibe afaka hitondra fandrosoana vaovao eto amin’ny firenena izay efa andrandrain’ny Malagasy. Tompon’ny ampitsony araka izany ny tsirairay, ny fanatanterahan’ny olom-pirenena tsirairay ny adidiny rahampitso no anisany hamaritra izany.